Whey Protein: Tsvaga mabhenefiti eiyi yekuwedzera!
Zvigadzirwa	 2 May 2019
Imwe yeanonyanya kuzivikanwa uye anoshandiswa ekuwedzera pasi rose Whey Protein. Iyo inokodzera zvakanyanya kune avo vanoda kuwedzera mhasuru maseru uye pane misiyano inokodzera vese vari kutanga mukuvaka muviri uye avo vakura.
Ndine chokwadi chekuti iwe wakanzwa nezve Whey Protein, kunyangwe kana usiri kubatanidzwa mune yemitambo nyika. Ndiko nekuti, vanachiremba vazhinji uye vezvehutano vanokurudzira izvi zvekuwedzera kune vanhuwo zvavo, nekuda kwehutano hwayo hwakasiyana.
Uye zvakare, kune imwezve rubatsiro inoenderana nekushandisa kweiyi yekuwedzera: kuonda. Nekudaro, zvinogara zvakanaka kuti zvijekese kuti zvinongobatsira mukupisa mafuta, nekuti iri harisi basa rayo, nekuti iro kune thermogenics.
Saka ini ndinokukoka iwe kuti uzive padyo nezvose zvakanaka izvo Whey Protein inopa kumushandisi wayo, kungave zvakananga kana zvisina kunangana, pamusoro pekuziva iyo mhedzisiro mhedzisiro inogona kukonzerwa nekushandisa zvisirizvo uye zvinopesana.
Wagadzirira Here? Saka ngatiende!
Chii chinonzi whey protein?
Whey protein inowedzera chikafu nehuremu hwehunhu hwakagadzirwa ne whey protein. Mukuumbwa kwayo kune zvakare maamino acids akadai seGlutamine, Arginine, pamusoro peiyo branched chain amino acids (BCAA's) ayo ari Leucine, Isoleucine naValine.
Kune mamwe ma Whey Protein misiyano ine maitiro avo seConcentrate, Isolated, Hydrolyzed, 3W uye kunyangwe Mukadzi Whey Protein.
Kubatsira kwemhasuru kuwanda kuwana
Mapuroteni ndiwo macronutrient makuru anokonzeresa kuvaka mhasuru uye kupora. Patinenge tichiita zvekudzidzira kurema kurovera, tsinga dzemhasuru dzinotambura kukuvara kwakati wandei kunoitwa patsva panguva yako yekuzorora.
Whey Protein inowedzera iyi mhasuru yekumutsiridza, ichiita kuti mhasuru ikure nekukurumidza zvakanyanya.
Uye zvakare, ichi chinowedzera chinopa kukurumidza kugaya, inova imwe yemabhenefiti ayo. Mapuroteni anoumbwa nemhando dzinoverengeka dzeamino acid uye, kana akagayiwa nekukurumidza, aya maamino acids anopinda muropa nekukurumidza uye nyore.
Imwe yeakanyanya amino acid ari emapuroteni ileucine. Iyo yakakosha amino acid (iyo muviri wedu isinga gadzire) inoshanda yakanangana nekuvakazve kwemhasuru fibers, nokudaro ichigadzira iri nani hypertrophy.
Mamwe mabhenefiti ayo Whey Protein anovimbisa muviri wedu kuwedzerwa simba uye kutsungirira mumuviri, kupera kuneta kwemhasuru (kuneta), kunodzivirira kurwadziwa kwemhasuru mushure mekudzidziswa, pakati pezvimwe zvinhu zvinovandudza mashandiro ekudzidzira uye, nekudaro, kuwana mhedzisiro. Yemhasuru.
Whey Protein haisi yekuwedzera yekuwedzera kune vanovaka muviri, ndiko kuti, chero mhando yemunhu anogona kuidya, chero bedzi paine kudiwa uye kuti ivo vanoremekedza gadziriro yemugadziri kana yezvokudya yekushandisa.
Pakati pezvakanakira Whey Protein inoenderana nehutano, tinogona kuratidza:
Inobatsira mukurapa kweasthma;
Inodzivirira matambudziko emwoyo;
Inobatsira kudzora cholesterol mazinga;
Inobatsira kudzora glucose yeropa;
Inobatsira kudzora BP.
Imwe pfungwa inofanirwa kujekeswa nezve Whey Protein ndeyekuti inogadzira zvimwe zvakanaka kune vanhu vane HIV. Iyo inodzivirira hutachiona maseru kubva mukukuvadza mhasuru nyama uye kurasikirwa nemhasuru.
Uye zvakare, iyo glutamine iripo mu Whey inobatsira kuwedzera hutachiona hwakakanganiswa nekubuda kwehutachiona. Zvisinei, kana uine hutachiwana hweHIV, zvinokurudzirwa kubvunza mazano ekurapwa usati waishandisa.
Zvakanakira kurasikirwa uremu
Kunyangwe Whey Protein isiri chete yekupisa mafuta emuviri, pane zvimwe zvinhu zvine chekuita nekushandisa kwayo.
Semuenzaniso, kana isu tikashandisa ichi chinowedzeredzwa chakabatanidzwa neyakaenzana chikafu uye kudzidziswa kwakakodzera, yedu metabolism inowanzo shanda nekukurumidza. Nenzira iyi, muviri wedu unopisa mamwe mafuta.
Uye zvakare, zvinoratidzwa nesainzi kuti Whey Protein inogona kubatsira kudzora satiety, kunyanya Mukadzi Whey uyo ane soy protein mune ayo maitiro. Nenzira iyo, iwe unongodya izvo zvaunoda, uchidzivirira yakakwira-koriori chikafu uye mamwe marudzi easina maturo anokuita iwe kuti uve wakakora.
Izvo zvakakosha kuti ujekese kuti hausi chero chero mhando yeiyo Whey Protein iyo inokodzera chero munhu pane wehuremu hwekudya kudya. Semuenzaniso, Whey Concentrate ine 70-80% chete yeprotein ine huwandu hwakanyanya hwemafuta uye makabhohaidhiretsi.
Naizvozvo, inonyanya kukodzera mune idzi kesi ndeye Isolated Whey, iyo ine 90% yemapuroteni uye yakadzika kwazvo zvemukati zvemafuta uye makabhohaidhiretsi.
Zvakare, chenjera nemari ye Whey Protein, nekuti mapuroteni akawandisa mumuviri anokwanisa kushandurwa kuita mafuta enzvimbo, izvo zvisingafadzi kune avo vanoda kuonda.
Side migumisiro uye contraindications
Sezvataona, Whey Protein inotorwa kubva kumaguru mapuroteni uye mazhinji emhando dzayo ane lactose. Naizvozvo, avo vasingashiviriri iyi disaccharide (lactose) vanofanirwa kudzivirira kushandiswa kwayo, zvikasadaro mimwe mhedzisiro inogona kumuka, se:
Dumbu rekudya matambudziko;
Vakadzi vane nhumbu vanofanirwa kudzivirira kushandiswa kwayo, sezvo nziyo dzeichi chinowedzera chingasave chakanakira kuumbwa kwemwana. Zvakare, vanhu vane itsvo, chiropa kana chero chimwe chirwere vanofanirwa kubvunza chiremba vasati vashandisa.
Izvozvi zvawave kuziva mabhenefiti ayo Whey Protein anogona kuunza mukuwandisa, hutano uye kunyangwe kuonda, chii chauri kumirira kuti utenge hari yako munguva pfupi?
Gara uchiremekedza huwandu hwakakurudzirwa nemugadziri kana wezvekudya zvinovaka muviri uyezve ziva zvinopesana. Nekuita izvi, unogona kudzivirira matambudziko akakomba ehutano.
Unoda kudzidza zvakawanda nezve mamwe akawanda marudzi ekuwedzera? Ndinokukurudzira DZVANYA PANO uye uwane Mazano ekuvaka muviri, ayo ane zvinyorwa zvezuva nezuva zvekuvaka muviri, kuwedzera, kudzidzisa uye nezvimwe!
Zinc Kuwedzeredza: Tsvaga ese mabhenefiti!
Collagen mumacapsule: Zvinoshanda zvechokwadi here? Tarira!
Yakanakisa gyms muSão Paulo
Nzira yekutora zviyero zvemuviri? Matipi ekuyera mhedzisiro yako zvakanaka!